Dooniin Iiraan osoo gara Sooriyaa deemaa jirtuu qabamte gadhiifamte – Fana Broadcasting Corporate
Finfinnee, Hagayya 13,2011 (FBC) – Dooniin Iiraan ji’a Waxabajji keessa boba’aa gara Sooriyaatti geessaa jirti jedhamuun shakkamtee Jibilaartaritti qabamtee turte gadhiifamte.
Sakata’insi galaanarraa gaggeeffame akka agarsiisutti dooniin taankerii boba’aa feeteettu kun gara bahaa galaana medetiraniyaanitti imalaa kan turte yoo tahu, bakka gahumsa ishee immoo Kalamaataa Giriik jechuun galmeeffatteetti.
Dooniin ugguramtee turte kun namoota doonittii irra turan 29 waliin gaafa bara Faranjoota Waxabajji 4, 2019 yoo tahu gargaarsa mootummaa Ingiliziin ture.
Tarkaanfichi Yunaayitid Kingidaam fi Iiraan gidduutti wal dhabdee kan uume yoo tahu, Iiraan doonii alaabaan Yunaayitid Kingidaam irra jiru tokko naannoo biyyoota Galfii Istenoo Impeeroo jedhamutti uggurtee ture.
Haa tahu malee abbaan qabeenyummaa doonittii mootummaa Iswiidiniidha.
Doonittiin harka Iiraan kan jirtu yoo tahu yoo hin gadhiiftu yoo tahe Ameerikaa waliin tahuun imala hulaa Haarmuuz irraan dooniin daldaltootaa Iiraan taasisan nan dhorka jette jechuun BBC gabaase.